Waa maxay sababta Pluto ma aha meeraha: sababaha ugu waaweyn | Shabakadda Saadaasha Hawada
Jarmal Portillo | 13/06/2022 10:00 | Astronomy
Pluto, meeraha la ilaaway, hadda ma ahan meere. Nidaamkeena qorraxdu waxa uu ahaan jiray sagaal meere ilaa la kala saarayo in meere uu yahay meere iyo in kale, Pluto waxa ay ahayd in uu ka soo baxo isku xidhka meerayaasha. Sannadkii 2006 waxa loo aqoonsaday meeraha dwarf ka dib 75 sano oo shaqo ah qaybta meeraha. Si kastaba ha ahaatee, muhiimada meerahan ayaa ah mid la taaban karo sababtoo ah jidhka samada ee dhex mara wareeggiisa waxaa loo yaqaan Pluto. Dad badan ayaan garanayn muxuu pluto u ahayn meere.
Sababtaas awgeed, waxaanu maqaalkan u hibeeyay inaanu kuu sheegno maxay yihiin sababaha ugu waaweyn ee Pluto aanu ahayn meeraha iyo waxa lagu garto.
2 Macluumaadka meerayaasha dwarf
3 Jawiga iyo halabuurka
4 Wareega Pluto
5 Waa maxay sababta Pluto ma aha meeraha?
Meeraha dwarf wuxuu ku wareegaa qorraxda 247,7 sano kasta wuxuuna daboolaa masaafada celcelis ahaan 5.900 bilyan km. Baaxadda Pluto waxay la mid tahay 0,0021 jeer cufka dhulka. ama shan meelood meel ka mid ah tirada dayaxa. Tani waxay ka dhigaysaa mid aad u yar in loo tixgeliyo meere.
Haa, waxay ahayd meeraha Ururka Astronomical International muddo 75 sano ah. Sannadkii 1930-kii, waxay magaceeda ka heshay ilaaha Roomaanka ee dhulka hoostiisa.
Waad ku mahadsan tahay helitaankii meerahan, daahfuryo waaweyn sida Kuiper Belt ayaa markii dambe la helay. Waxaa loo arkaa meeraha ugu weyn ee dwarf, oo ka dambeeya Eris. Waxay inta badan ka sameysan tahay noocyada barafka qaarkood. Waxaan ogaanay in barafku ka samaysan yahay methane barafaysan, mid kalena waa biyo, mid kalena waa dhagax.
Macluumaadka ku saabsan Pluto waa mid aad u xaddidan, sababtoo ah tignoolajiyada laga soo bilaabo 1930-meeyadii may ahayn kuwo horumarsan oo ku filan si ay u bixiyaan daahfurka muhiimka ah ee walxaha ka fog dhulka. Ilaa waagaas, waxa ay ahayd meeraha kaliya ee aanay soo booqan dayax-gacmeedyadu.
Bishii Luulyo 2015, iyada oo ay ugu wacan tahay hawlgal cusub oo hawada sare ah oo ka tagay Earth 2006, wuxuu awooday inuu gaaro meeraha cirifka ah oo uu helo macluumaad badan. Macluumaadkani waxay qaadataa hal sano si loo gaaro meeraheena.
Macluumaadka meerayaasha dwarf
Kororka iyo horumarinta tignoolajiyada awgeed, natiijooyin iyo macluumaad badan oo ku saabsan Pluto ayaa la helayaa. Wareegteedu waa mid gaar ah, oo la siiyay xidhiidhka wareeg ee uu la leeyahay dayax-gacmeedka, dhidibkiisa wareegtada, iyo isbeddelka xadiga iftiinka ku dhacaya. Dhammaan doorsoomayaashan ayaa meerahan dwarf ka dhigaya mid soo jiidasho weyn u leh bulshada sayniska.
Waa waxa ka fog qorraxda dhulka intiisa kale oo ka kooban nidaamka qorraxda. Si kastaba ha ahaatee, iyadoo ay ugu wacan tahay hufnaanta wareegeeda, waxay 20 sano ka dhowdahay wareegga Neptune. Pluto waxa uu ka tallaabay wareegga Neptune bishii Janaayo 1979 mana uusan u dhowaan Qorraxda illaa Maarso 1999-kii. Dhacdadani ma dhici doonto mar kale ilaa Sebtembar 2226. Marka hal meere uu galo wareegga kale, ma jirto suurtogalnimo isku dhac. Tani waa sababta oo ah orbit-ku waa 17,2 darajo marka loo eego diyaaradda ecptic. Thanks to this, waddooyinka orbits waxay ka dhigan tahay in meerayaashu weligood kulmaan.
Pluto waxay leedahay shan dayax. Inkasta oo xajmigiisu uu la mid yahay kan asteroid-keena, haddana waxa uu innaga leeyahay 4 dayaxood oo naga badan. Dayaxa ugu weyn, oo lagu magacaabo Charon, wuxuu qiyaastii nus le'eg yahay Pluto.
Jawiga iyo halabuurka
Jawiga Pluto waa 98 boqolkiiba nitrogen, methane, iyo xoogaa raad ah oo kaarboon monoxide ah. Gaasaskan ayaa cadaadis gaar ah ku haya oogada dhulka, inkastoo uu 100.000 jeer ka yar yahay cadaadiska dhulka ee heerka badda.
Methane adag ayaa sidoo kale la helay, sidaas darteed heerkulka meeraha cirifka ah ayaa lagu qiyaasaa inuu ka hooseeyo 70 Kelvin. Nooca gaarka ah ee orbit awgeed, heerkulku waxa uu leeyahay kala duwanaansho la taaban karo oo agtiisa ah. Pluto waxa ay u dhawdahay 30 AU qoraxda iyo ilaa 50 AU oo qoraxda u jirta. Marka ay cadceedda ka fogaato, waxaa meeraha dushiisa ka abuurma jawi dhuuban, kaas oo baraf ku dhaca oo korka ku dhaca.
Si ka duwan meerayaasha kale sida Saturn iyo Jupiter, Pluto waa dhagax weyn marka loo eego meerayaasha kale. Baadhitaan ka dib, waxaa la soo gabagabeeyey in inta badan dhagaxa meeraha dwarf uu ku qaso baraf sababtoo ah heerkulka hooseeya. Sida aan horay u soo aragnay, baraf asal ahaan kala duwan. Qaar waxaa lagu qasaa methane, qaarna biyo, iwm.
Tan waxaa lagu xisaabin karaa marka la eego noocyada isku-darka kiimikada ee ku dhaca heerkulka hooseeya iyo cadaadiska inta lagu jiro samaynta meeraha. Saynis yahanada qaar qiyaasi in Pluto dhab ahaantii yahay Neptune dayax lumay. Taasi waa sababta oo ah waxaa suurtogal ah in meeraha cirifka ah lagu tuuray wareegyo kala duwan inta lagu jiro samaynta nidaamka qorraxda. Sidaa darteed, Charon waxa ay samaysaa ururinta walxaha fudud ee isku dhaca.
Pluto waxay qaadataa 6.384 maalmood si ay u dhamaystirto hal wareeg sababtoo ah waxay la mid tahay wareegyada dayaxa. Taasi waa sababta Pluto iyo Charon ay had iyo jeer isku dhinac yihiin. Dhidibka wareeggu dhulku waa 23 darajo, halka dhidibka asteroid-ka wareeggiisu yahay 122 darajo. Tiirarka waxay ku dhow yihiin in diyaaradahooda orbital.
Markii ugu horraysay ee la arkay, dhalaalkii tiirkeeda koonfureed ayaa muuqday. Markay aragtidayada Pluto is beddesho, meeraha wuxuu u muuqdaa inuu madoobaado. Maanta waxaan ka arki karnaa dhulbaraha asteroid-ka dhulka.
Intii u dhaxaysay 1985 iyo 1990, meeraheena waxa ay la jaanqaadeen wareegtada Charon. Sidaa darteed, qorrax madoobaadka Pluto ayaa la arki karaa maalin kasta. Thanks to xaqiiqadan, waxaa suurtagal ah in la ururiyo tiro badan oo macluumaad ah oo ku saabsan albedo ee meerahan dwarf. Waxaan xasuusannahay in albedo uu yahay qodobka qeexaya milicsiga shucaaca qorraxda ee meeraha.
Sannadkii 2006, gaar ahaan Ogosto 24, Ururka Caalamiga ah ee Astronomical Union (IAU) wuxuu qabtay shir aad muhiim u ah: Qeex sida saxda ah meeraha waxa uu yahay. Taasi waa sababta oo ah qeexitaanadii hore waxay ku guuldareysteen inay si sax ah u gartaan waxa meeraha uu yahay, Pluto-na waxa uu ahaa bartamaha dooda, sida astronomer Mike Brown uu helay shay Eris ka weyn Pluto ee Kuiper Belt laftiisa. Tani waxay xaddiday xiddigiska wakhtigaas, maadaama haddii Pluto u qalmo meeraha, muxuu Iris u buuxin waayay? Hadday sidaas tahay, imisa meere oo suurtagal ah ayaa ku hadhay suunka Kuiper?
Dooddu way sii qotontay ilaa Pluto ugu dambayntii wayday magaceedii meeraha intii lagu jiray shirkii IAU 2006. Ururka Caalamiga ah ee Astronomical Union wuxuu ku qeexaa meeraha inuu yahay jidh qiyaasan oo wareegsan oo ku wareegaya xiddigta.. Sidoo kale, meerayaashu waa inay lahaadaan wareegyo cad cad.
Pluto ma buuxin shuruudaha dambe, sidaas darteed si rasmi ah ayaa looga saaray inuu noqdo meeraha nidaamka qorraxda. Laakiin dooda ayaa wali furan, iyadoo qaar ka mid ah ay ku doodayaan in Pluto uu ku soo laabto liiska rasmiga ah. 2015, NASA's Horizons's New Horizons waxay ogaatay in meeraha "qadiimiga" uu ka weyn yahay sidii ay u maleeyeen cirbixiyayaashu.
Taliyaha howlgalka Alan Stern waxa uu ka mid ahaa cirbixiyeenadii isku khilaafay qeexida meeraha hadda, isaga oo ku dooday in Pluto ay tahay in uu ka mid ahaado meerayaasha nidaamka qoraxda.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad ku ogaan karto sababaha Pluto uusan ahayn meeraha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Astronomy » Waa maxay sababta Pluto ma aha meeraha?
waa maxay estuary